Ruushka Ayaa Hadal Dhif Ah Ka Sheegaya Ku Guuldaraysiga Soomaaliya Inay Qabato Doorasho - Axadle » Axadle Wararka Maanta
Ruushka ayaa hadal dhif ah ka sheegaya ku guuldaraysiga Soomaaliya inay qabato doorasho – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 Last updated Apr 30, 2021
Muqdisho (Axadle) – Dowlada Ruushka ayaa ka faalootay ismariwaaga siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya waxayna balan qaaday inay ka qeyb qaadan doonto dadaallada caalamiga ee xal raadinta.
Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa lagu yiri: “Waxaan la soconaa xaaladda Soomaaliya, oo ay uga sii dartay guuldaradii doorashadii Febraayo.”
“Ka xubin joogto ah Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, Russia waxay qorsheyneysaa inay taageerto dadaallada caalamiga ah ee ku saabsan sidii gargaar ballaaran loo siin lahaa Muqdisho.
Waa markii ugu horeysay oo Ruushku ka hadlo ismari-waaga ka taagan Soomaaliya tan iyo markii uu xilka qabtay Madaxweyne Farmaajo 7-dii Febraayo 2021.
Z # Zakharova: Waxaan la soconaa horumarka ka socda ?? #Soomaaliya, oo ay uga sii dartay guuldaradii ku timid in la qabto doorasho guud bisha Febraayo. Xubin joogto ah #UNSC, ?? # Russia waxay qorsheyneysaa inay taageerto dadaallada caalamiga ah iyo inay siiso gargaar dhameystiran #Muqdisho pic.twitter.com/2KDx8ZOBOk
– MFA Russia @ (@mfa_russia) Abriil 29, 2021
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayday inay u dhowaato Ruushka, kadib markii reer Galbeedku diideen muddo kordhinta Farmaajo, waxaana 15-kii Abriil, wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Belel Cismaan iyo danjiraha Ruushka ee Soomaaliya iyo Jabuuti Mikhail Golovanov ay ku kulmeen Muqdisho
Axadle ayaa werisay 7-dii Abriil in dowladda Soomaaliya ay heshiis taariikhi ah la saxiixatay Shiinaha iyo Ruushka, oo qeyb ka ah Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay.
Labada dowladood ayaa u balan qaaday madaxweyne Farmaajo inay ka hor imaanayaan qaraar kasta oo ka dhan ah Soomaaliya isla markaana la horgeeyo golaha amaanka.
Soomaaliya ayaa taa bedelkeeda la sheegay inay ballanqaaday iskaashi u dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka oo la siiyay fursad wanaagsan oo ay kula tartanto gobolka.
Laakiin xitaa haddii Ruushka iyo Shiinaha ay ka soo horjeedaan qaraarka Golaha Amniga, waa in la ogaadaa in Mareykanka iyo Yurub ay soo rogi karaan cunaqabateyn iyaga u gaar ah, maadaama dhaqaalaha adduunka oo dhan iyaga intiisa badan ay iyagu gacanta ku hayaan.